HGH စင်္ကာပူ | HGH စင်္ကာပူဆေးဝါး | လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းဆေးခန်း
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ AUD JPY အီးယူအာရ် GBP THB MYR AED CHF HKD SAR
Genotropin GoQuick 12 mg 36 IU (အခြားအမည်များ - HGH, Somatropin, Human Growth Hormone)
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် အရည်အမှား (ထုတ်ကုန် - တံဆိပ်လိုင်း 32): -Infinity%
$ 685 စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်
မှတ်စု! DHL / UPS ပို့ဆောင်ခတွင်အခမဲ့ပါ ၀ င်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းတွင်လူကြိုက်များသောမိုဘိုင်း messenger များ၊ app တွင် chat in app ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ WhatsApp ကို ကွေးနနျးစာ Viber ကို Facebook က တိုက်ရိုက်ချက်တင် E-mail ကို ⚡⚡⚡
သို့မဟုတ် sms ကိုခေါ်ဆိုပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ် +1 213 283 0532 သို့ခေါ်ဆိုပါ
1 pen x 36 IU (၎င်းသည်အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်) - ဒေါ်လာ ၃၅၀ SGD2pens x 36 IU (၎င်းသည်အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအဖြေဖြစ်သည်) - ဒေါ်လာ ၃၅၀ SGD ၃ တံဆိပ် x ၃၆ ယူအက်စ် (အပြည့်အ ၀ သင်တန်း ၁/၃ နီးပါး) - ဒေါ်လာ ၃၅၀ ဒေါ်လာ4ခြံ x ကို 36 IU ကို - $ 2,521 SGD ၅ ပေါင် x ၃၆ ယူအက်စ် (သင်တန်းတစ်ဝက်) - ဒေါ်လာ ၃၅၀ SGD Hot deal! ၅ ခြံဝယ်ယူ5အခမဲ့ရ! က x 1 IU (သင်တန်းတစ်ဝက်) - $ 36 SGD6ခြံ x ကို 36 IU ကို - $ 3,640 SGD7ခြံ x ကို 36 IU ကို - $ 4,158 SGD 8 ခြံ x ကို 36 IU ကို - $ 4,615 SGD9ခြံ x ကို 36 IU ကို - $ 5,115 SGD 10 pins x 36 IU (အပြည့်အဝသင်တန်း) - $ 5,555 SGD အရောင်းမြှင့်တင်ရေး! 10 ခြံဝယ်2အခမဲ့ရ! က x 36 IU (အပြည့်အဝသင်တန်း) - $ 5,555 SGD တစ်လလျှင် ၂ ပေါင် x ၃၆ ယူအက်စ် + သိုလှောင်ငွေဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ပေးရမည် တစ်လလျှင် ၂ ပေါင် x ၃၆ ယူအက်စ် + သိုလှောင်ငွေဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ပေးရမည် ငွေသွင်းခြင်း - အစီအစဉ် A၊ B - ဒေါ်လာ ၃၅၀ ဒေါ်လာ
1 pen x 36 IU (အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေ)2pens x 36 IU (အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေ) ၃ ခြံ ၃၆ ခြံ (၃/၃ နီးပါး)4ခြံ x ကို 36 IU ကို ၅ ခြံ ၃၆ ယူအက် ​​(သင်တန်းတစ်ဝက်) Hot deal! ၅ ခြံဝယ်ယူ5အခမဲ့ရ! x ၃၆ ယူအက်စ် (သင်တန်းတစ်ဝက်)6ခြံ x ကို 36 IU ကို7ခြံ x ကို 36 IU ကို 8 ခြံ x ကို 36 IU ကို9ခြံ x ကို 36 IU ကို ၁၀ ပင် x ၃၆ ယူအက်စ် (သင်တန်းအပြည့်) အရောင်းမြှင့်တင်ရေး! 10 ခြံဝယ်2အခမဲ့ရ! x ၃၆ ယူအက်စ် (သင်တန်း) တစ်လလျှင် ၂ ပေါင် x ၃၆ ယူအက်စ် + သိုလှောင်ငွေဖြင့်သာစာရင်းသွင်းပါ တစ်လလျှင် ၂ ပေါင် x ၃၆ ယူအက်စ် + သိုလှောင်ငွေဖြင့်သာစာရင်းသွင်းပါ ငွေသွင်းခြင်း - အစီအစဉ် A၊ B ပြည့်စုံစုံကိုရွေးချယ်ပါ
လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းသင်တန်းအားဖြင့်ကုသမှု၏အသုံးပြုမှုကို HGH အဘို့အရိပ်လက္ခဏာ,3အဓိကလမ်းညွန်
ကာယဗလများအတွက် 200% -300% အားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်
anti-အိုမင်းရည်ရွယ်ချက်များ HGH သင်တန်း
HGH ဆီကိုယ်အလေးချိန်, ကိုမီးရှို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်သောသုတေသနကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စင်္ကာပူအပါအ ၀ င်နိုင်ငံများစွာရှိလူ့ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းထုတ်ကုန်များကိုဖြန့်ဖြူးသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်စင်ကာပူရှိပထမဆုံးသော HGH အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးအပြည့်အဝရရှိမှုကိုအာမခံပေးနိုင်သောပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းစင်္ကာပူရှိဘယ်နေရာသို့မဆိုအမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမြန်ဆန်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်စစ်မှန်။ လုံခြုံသည်၊ အကျိုးရှိသည်။ နိုင်ငံများစွာရှိ FDA (Food & Drug Administration) မှအတည်ပြုသည်။ E-Commerce မှတ်ပုံတင်နံပါတ်: F0167552340007
ရုပ်ပုံများနှင့်အတူ HGH activation ညွှန်ကြားချက်
အကြံပြုချက်များ HGH ၏သောက်သုံးသော
နံနက်စာမစားခင်ဗလာဗိုက်ပေါ်၌သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးညစာစားပြီးနောက်အိပ်ရာမ ၀ င်ခင် ၂ နာရီအကြာတွင်ဆေးထိုးခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုဆရာဝန်များက endocrinologist ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ပါ။
တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် HGH ဆေးထိုးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဘယျသို့တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် HGH များအတွက်အသုံးပြုသနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အလုပ်မလုပ်သောအရာအတွက်ပိုက်ဆံမဖြည့်စေလိုပါ။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွင်ကျန်းမာရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘူယျအား ၀ ယ်ရန်မထောက်ခံပါ HGH ထုတ်ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို FDA မှအတည်ပြုရုံသာမကယနေ့စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အင်အားအရှိဆုံးပေါင်းစပ်ထားသောလူ့ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ IMS ၏အဆိုအရသိရသည်။ HGH တွင် Somatropin ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသဘာဝအရထုတ်လုပ်သောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဆိပ် (၁၉၁) ခုပါဝင်သည်။ သတိရ! စျေးပေါသော HGH မေးခွန်းထုတ်စရာထုတ်ကုန်ကိုသိမ်းဆည်းရန်သင်တုန့်ပြန်ခြင်းနှင့်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ HGH စင်္ကာပူဆေးဝါး ဝံကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးအပြည့်အဝတာဝန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်အာမခံကိုအကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လက်မှတ်များကိုပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ HGH ၏ဖြန့်ဝေ Options များ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေးပို့
မြန်နှုန်း Post ကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေ
စင်္ကာပူမှ EMS နေဖြင့်အခမဲ့ 2-3 ရက်ပေါင်းပေးပို့, ဓလေ့ထုံးစံလုံးဝလုံခြုံကျမ်းပိုဒ်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့၏ပိုက်ဆံပြန်လာပါလိမ့်မယ်
ယခု 24-48 နာရီ! အစာရှောင်ခြင်းနှင့်မှတပါး
Call / WhatsApp ကို +1 213 283 0532
မူပိုင်ခွင့်© 2021 HGH Singapore ။ | E-Commerce မှတ်ပုံတင်နံပါတ် - 0167552340004 | FDA အတည်ပြုပြီး